Foxconn Inogona Kuzivisa Zvirongwa zvekuwedzera muUnited States Svondo rino | IPhone nhau
Mukupedzisira, zvinoita sekunge Donald Trump aenda nazvo uye achawana chikamu chekugadzirwa kwezvinhu zve iPhone zvichaitwa muUnited States. Imwe yenyaya dzakashandiswa nemutungamiriri wenyika iye zvino panguva yake mushandirapamwe wesarudzo yaive iyoyo yaigona kumanikidza Apple kugadzira zvakawanda zvezvigadzirwa zvayo muno.
Kunyangwe ichi chisarudzo panguva ino chiri kure nekugadzirwa, zvinoita sekunge Foxconn ndiye wekutanga kufamba uye pamwe vhiki ino zivisa zvirongwa zvako zvemangwana kuvhura yekutanga fekitori fekitori mudunhu reAmerica.
Sekureva kwemushumo weThe Wall Street Journal, Foxconn anoronga kuronga chiitiko muWashington DC svondo rino umo ichazivisa zvirongwa zvekudyara munyika, zvirongwa izvo zvinosanganisira kuvhura fekitori yechiratidziri muWisconsin uye pamwe muDetroit. Kana chirevo ichi chikasimbiswa, Zvichaitika mazuva akati wandei mushure mechiitiko chakarongwa neMutungamiriri weUnited States achiratidza zvigadzirwa "Made in America".
Kunyangwe kuve mumwe weakakura, kana asiriye muhombe, mutengesi kuna Apple nemamwe makambani mazhinji, Foxconn yaisazogadzira fekitori muWisconsin kugadzira zvigadzirwa zveAppleAsi, materevhizheni anozogadzirwa. Kugadzirwa kweichi fekitori kwaizodhurira iyo Chinese femu ingangoita zviuru mazana manomwe zvemamiriyoni euros uye yaizoshandisa zviuru zvevanhu.
Kana kugadzirwa kwechipiri fekitori munyika kuchizopedzisira kwasimbiswa, kunyanya kuDetroit, iyi inogona kuitirwa kugadzirwa kwechinhu uye pamwe kuungana kwezvigadzirwa zveApple munyika. Foxconn yaizotsvaga rubatsiro rweApple kubhadharisa zviuru mazana manomwe zvemadhora zvaizove nemubhadharo weichi fekitori yechipiri yakagadzirirwa chete kugadzira zvigadzirwa zveApple muUnited States.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Foxconn Inogona Kuzivisa Zvirongwa zvekuwedzera zveUS Vhiki Ino
Iyo yazvino Apple Park vhidhiyo inotiratidza maitiro ekushongedza kwenzvimbo kunochinja